Hay'adda CPJ oo Puntland ugu baaqdey in ay sii daayaan suxufi Cumar Dheere | SAHAN ONLINE
Hay’adda CPJ oo Puntland ugu baaqdey in ay sii daayaan suxufi Cumar Dheere
Hay’adda CPJ ee ilaalinta suxufiyiinta caalamka ayaa bayaan ka soo saartey xariga Suxufi Cumar Siciid Maxamed (Cumar Dheere), waxaana ay maamulka Puntland ugu baaqdey in si shuruud la’aan ah loo sii daayo Cumar Dheere.
Baaqa ka soo baxay CPJ ayaa lagu yiri.
“….Dhaqanka ah in Boolisku xiro Suxufiyiinta markey doonaan, iyada oo aan wax denbi ah lagu eedeyn laguna xukumin, waxay waxyeelo ku tahay xornimada warbaahinta ee Puntland. Xiriiriyaha CPJ ee Bariga Afrika Angela Quintal waxay ugu baaqeysaa in maamulku sida ugu dhakhsiyaha badan u sii daayo Cumar Dheere isla amrkaana ay joojiyaan tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda.
Bayaanka CPJ ayaa lagu sheegay in hay’addu xiriir la sameysey agaasimaha guud ee Warfaafinta Mowlid Abukar iyo Wassiir ku xigeenka warfaafinta Cabdirisaaq Ismaaciil Cumar waxayna u sheegeen in aysan garneyn sababta uu Cumar Dheere u xiran yahay.
CPJ oo xiriir la sameysey Madaxtooyada Puntland gaar ahaan afhayeenka Cabdullaahi Quraan-jecel ayaa diidey in uu ka ajwaabo teklefoonada CPJ iyo weliba qoraal loo diray sida lagu yiri bayaanka.
Cumar Dheere ayaa ku xiran xabsi si gaar ah loo sameeyey oo ka badax banaan laamaha caddaaladda kaas oo lagu hayn karo qofka muddo ka badan inta uu xirnaan karo isaga oo aan maxkamadi xukumin.
Cumar Siciid Maxamed ayaa ku xiran Kontroolka Koonfureed ee Garoowe maalintii afaraad isaga oo ilaa iminka aan lagu eedeyn wax denbi ah oo uu galay, waxaana uu u xiran yahay amar ka soo baxay Madaxtooyada Garoowe.